Uhlolojikelele lwe-ITIL Sibutsetelo - Isisekelo se-ITIL - ITS Tech School
Uhlolojikelele lwe-ITIL Sibutsetelo - Eziyisisekelo ze-ITIL
Uhlolojikelele lwe-ITIL Sibutsetelo
Kuyini isitifiketi se-ITIL
I-Lifestycle ye-ITIL yesevisi
Imiqondo Yokhiye We-ITIL: Izinqubo, Imisebenzi
I-ITIL Ingxenye Eyinhloko: Isu Sevisi
Inqubo Yesevisi Yesevisi
I-ITIL Ingxenye Eyinhloko: Isevisi Yomsebenzi
I-ITIL Core Component: Ukuguqulwa Kwemisebenzi
I-ITIL Ingxenye Eyinhloko: Isevisi Yokusebenza
I-ITIL Ingxenye Eyinhloko: Ukuthuthukiswa Komsebenzi Oqhubekayo (CSI)
I-ITIL Certification ibhekwa njengesidingo esingenakuphikwa ekusebenzeni kwe-IT Service njengoba iqondwa yizo zonke brand eziphawulekayo kanye nabachwepheshe. Labo abanesiqiniseko sokuqala kwabo babhekwa njengokwethenjelwa ngokwengeziwe phakathi kokuxoxwa komsebenzi. Nge-ITIL, izinhlangano zilungele ukudlulisela imisebenzi ephumelelayo, enhle kumakhasimende abo.
Isakhiwo sihlehlisela izinsizakalo zabo futhi sabeka izinkombandlela zochwepheshe ngamunye okufanele bazithathe. Ngaphambi kokuba uqale ukulungela ukuthatha izivivinyo ze-ITIL, zibhekelela ukwazi imibono eyinhloko, ukuthi isebenza kanjani nokuthi yini encike kulowo ophikisanayo ukuze aqinisekiswe.
I-ITIL ihlala emtatsheni we-Information Technology Infrastructure Library futhi isakhiwo sinikeza imikhuba eboniswayo esetshenziswe kabanzi njengengxenye ye-IT Service Management, i-ITSM nezinsizakalo ezahlukene ezihlose ukuhlinzeka ngamasevisi ekhwalithi kumakhasimende namakhasimende abo. Isisusa esiyisisekelo sokuthola isitifiketi ukunikeza izinhlangano indlela enamandla yokwandisa i-ROI nokuhlehlisa izinqubo zebhizinisi. Ukuqashelwa okuqinisekisiwe kubonakala njengengxabano ephumelelayo yokuhola inhlangano ngendlela efanele.
Ukuze induduzo yabachwepheshe kanye nezinhlangano ze-IT, i-ITIL ihlukaniswe ngezigaba ezinhlanu eziphawulekayo, ukucacisa
Isu leNkonzo ye-ITIL
I-ITIL Isevisi Yesevisi
Ukuguqulwa kwe-ITIL yesevisi
Isevisi Yesevisi ye-ITIL
Ukuthuthukiswa kweNkonzo ka-ITIL okuqhubekayo
Ngesikhathi lapho zonke izingxenye ezinhlanu zihlanganiswa, zakha umsebenzi wokuphila wenkonzo futhi zihlukaniswa ngezigaba ezenzakalelayo ukuze zihlukanise kahle izinqubo ezinkulu zibe nezinqubo ezincane. Ingxenye iphakamisa abameleli ukuba badlulisele umsebenzi bese beqedela inkambo ethile yezenzakalo.
Izingxenye eziyisihlanu eziphawulekayo ze-ITIL zihlukaniswa ngokwengeziwe ezinkambeni ezihlukene kanye nasezindaweni zamandla ezinjengezicelo zenhlangano. Bahlukaniswa ngezigaba ezahlukene zokuphatha, isibonelo, ukuqondisa isicelo, ukukhawulela ukuphathwa, ukukhishwa nokuphathwa kwezigameko nokuphathwa kwemicimbi phakathi kokuhlukaniswa okuningi okuhlukile.
Isigaba ngasinye sezingxenye zesimiso sezinhlelo sihlukaniswe ngezinqubo ezahlukene noma imisebenzi njengeziciko zesakhiwo se-ITIL.
Funda Futhi: ITIL Foundation Ukulungiselela Ukuhlolwa | Izivivinyo zamahhala ze-ITIL zokuzikhandla
Leli gama leSikhungo Sesevisi libhekisela enkambweni isazi esingayithumela ekuqedeni ngokwanele umsebenzi wokuphila wenkonzo. Isu ngalinye lenziwe kufanele lihambisane nalokho okudingwa ikhasimende kanye nemigomo yabo ende.
Isihloko esiyinhloko sihlukaniswe ngokwengeziwe ezindaweni ezihlukahlukene.
Inqubo yokuphathwa kwePhothifoliyo yesevisi - Iphothifoliyo yesevisi ibhekisela kuzo zonke izinsizakalo ezinikezwe yinhlangano futhi ihlukaniswe zibe izingxenye ezintathu eziphawulekayo - ibhawulweni yensizakalo, inkomba yenkonzo kanye nezinsizakalo zokuyeka.
Inqubo Yokuphatha Isicelo - Ukuqhubeka kulawula ukuqonda ukuthi yini iklayenti idinga futhi isithinta isicelo sokuthuthukisa izinto noma amasevisi. Ukuqonda iklayenti nokubakhuthaza ukuthi bathenge izinto ezitholakalayo,
Amaphrofayli amaphrofayli - Uhlukanisa amaklayenti ngezigaba ezehlukene futhi aqonde okudingekayo.
Izibonelo zemiSebenzi yeBhizinisi - Uma amaklayenti ehlelwe ngokuphelele, kuyithuba elihle lokukhipha ukuziphatha kwabo nokuthi bazuze kanjani izinsizakalo ekutholeni isicelo.
Inqubo Yokuphathwa Kwezezimali - Amagama ezezimali acabanga ingxenye eyinhloko futhi le mbono iyasakaza lapho inhlangano ihola khona inkokhelo yayo, yenza uhlelo lwezezimali ngenxa yezitolimende ezenziwe ikhasimende futhi zikhokhise amakhasimende noma amakhasimende ngenxa yokusebenza kwezindleko ezibalulekile ukunikeza okuqinisekisiwe isevisi.
Igajethi yensizakalo ine-life cycle yayo eyayizinikele futhi izingxenye zangempela ziyaziwa ngokuthi yi-Four Ps of Service. Kunjalo,
Abantu - I-HR edingekayo yokwenza inqubo
Izinqubo - Izinqubo zokuphathwa kwezinsizakalo ezibalulekile ekusebenzeni
Izinto - I-base emisha kanye nezesekeli zidinga ukuqedela
Izinkambiso - Izenzo ezisekela, abahlala ngaphandle bahlale bedingekile ukusekela ezinsizakalweni inhlangano engakwazi ukubhekana nayo.
Umgomo oyinhloko wokusebenzisa ukuguqulwa kwenkonzo ukuqinisekisa uma izinqubo ezintsha zakhiwa futhi zithunyelwa ebhizinisini le-IT, zenziwa ngaphandle kokuphikisana nemithetho ebekwe yinhlangano.
Zonke izinto kanye nezinsizakalo ezihlangene zishintsha ngendlela iklayenti engayithola ngayo imiphumela ekhishiwe. Ukubala ukulawula okuphelele ngezinzuzo, kungaba imishini noma izinhlelo, ukuvumela amasevisi nokusetshenziswa.
Izingxenye eziningi zihamba ngaphansi kwalesi sigaba kufaka phakathi,
Ukuphatha Ukuphathwa (Ukuguqula Ukuhlela Nokusekela)
Ukuphathwa kokuKhipha nokuThutha
Isevisi yokuvunywa nokuhlolwa
Ukuphathwa kwe-Asset ne-Configuration Management
Imisebenzi Yesevisi ingenye ingxenye yesitifiketi se-ITIL futhi ifaka i-rundown enkulu yezinqubo okumelwe zenziwe ngokufanele ukuze idlulisele kahle lokho ikhasimende elikulindele kulo msebenzi.
Ukugijima kusuka ekuphathweni komcimbi, ukuphathwa kwezigameko zokunakekela izingozi kanye nezingxenye zobuchwepheshe zomsebenzi kuqinisekisiwe ngaphansi kwengxenye yokusebenza yesevisi.
Umgomo oyinhloko wenkampani ukuqinisekisa ukuthi izidingo zamaklayenti zihlangene kahle, ukudumazeka kwezidingo zixazululwa ngesikhathi kanye nokusebenza njalo kwenziwa ngokushesha noma ngezindaba zobuchwepheshe. Umhlinzeki wenkonzo uphethe ukuqinisekiswa kokuthunyelwa okusebenzayo nangokusemthethweni kwezinsizakalo. Izingxenye ezihlukene zesevisi ye-ITIL Core ingxenye yilezi zihlanganisa,
Ukulawula ukusebenza kwe-IT
Ukuphathwa kohlelo lokusebenza
Umbono wokushayela i-CSI uyisisekelo esiyisisekelo. Inhlangano ngayinye idinga ukuzuza kusuka ekuqondeni kwabo futhi idale izimfanelo zazo. Ulwazi nolwazi oluvela esikhathini esidlule luzosetshenziselwa ukwakha izinqubo zesikhathi esizayo zenhlangano okufanele zithathwe.
Ukuthuthukiswa komSebenzi okuqhubekayo kwenza izinqubo ezintsha, zenze izindlela ezingcono zokunciphisa ukucatshangelwa nokukhanya kwendawo yokubamba futhi ngaphezu kokuthola amaklayenti amasha. Intuthuko ehlukene nemibono ehlobene ne-CSI,
Ukuqaphela izinhlelo ze-CSI
Isitifiketi se-ITIL ukuhlolwa okunzima kakhulu kwabashayeli okwamanje kodwa onomsebenzi osebenza kahle osebenze ezinhlanganweni ze-IT isikhathi eside angase athole imibono engadingeki ukuyiqonda. Lezi yizingxenye ezisemqoka kanye nezigaba ezingezansi ezibandakanyeka ne-ITIL. I-synopsis esheshayo ukukunika ukuthi isitifiketi sini ngaphambi kokuthi ubonise ukuhlolwa ukuqeda umqeqeshi oqinisekisiwe. Ukuqedela okuphumelelayo kuzodonsa abaphathi nabathengi abangcono ukuze bakuthole izinhlangano zabo.
ITIL Foundation Ukulungiselela Ukuhlolwa | Izivivinyo zamahhala ze-ITIL zokuzikhandla